Galmudug oo soo bandhigtay Nin ku eedeysan kiiska Xamdi oo Ciidamada qabteen - Awdinle Online
Galmudug oo soo bandhigtay Nin ku eedeysan kiiska Xamdi oo Ciidamada qabteen
Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa shaacisay in Ciidanka Amniga Galmudug ay xalay abaaro saqdii dhexe ku guulaystay In ay gacanta ku soo dhigaan eedeeysane Maxamed Ibraahim Cismaan, 24 jir, kaasoo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaalla magaalada Cadaado.
Eedaysane Maxamed Ibraahim ayaa lagu tuhmaayaa inuu ku lug lahaa kiiskii kufsiga iyo dilka ahaa ee marxuumad Xamdi Maxamed Faarax loogu geystay Hotel ku yaalla degmada Waaberi magaalada Muqdisho.
Laba bilood ka hor ayey ahayd markii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada Amniga Galmudug ee Magaalada Gaalkacyo Wiil dhallinyaro ah oo xasuuq wadareed ka soo geystay duleedka magaalada Muqdisho.
Wasaaradda amniga Galmudug waxey bogaadinaysaa dadaalka ciidamada amniga iyo taageerada ay shacabka Galmudug la Garab taagan yihiin ciidamadooda ayaa lagu yiri War kasoo baxay Wasaaradda amniga Galmudug .
Previous articleBooliska Soomaaliya oo qabtay Mid kamid ah Rag loo heysto kufsiga & dilkii Xamdi
Next articleMadaxda Dowlad Goboleedyada oo Arrimo culus kala hadlay Taliyaha Afrcom